Izindaba - Kungakanani okwaziyo ngengilazi yemoto?
Ngokuthandwa kwezimoto kanye nokuthuthukiswa kwamazinga okuphila, abanikazi bezimoto kancane kancane baqala ukunaka ubuhle bemoto, ukubukeka kwemoto, amandla emoto nokunye, kodwa bangazinaki izesekeli ezibalulekile okufanele babhekane nazo njalo lapho beshayela: ingilazi yemoto.
Lapho ingilazi yemoto iphukile, ungase ucabange: thenga eshibhile, ishibhile kangcono. Akukona nje okomoya nemvula, inqobo nje uma ungakubona. Akulungile, akulungile, akulungile! Wazi kangakanani ngezingozi? Uma ushayela, uhlale uzizwa ungakhululekile futhi unesiyezi. Uya esibhedlela uyohlolwa ngezindlela ezehlukene futhi usola ukuthi unenkinga emzimbeni, kodwa ngemva kokuhlolwa, awubanga nalutho. Ubucabanga ukuthi ushintshe ucezu lwengilazi yemoto ewumgunyathi nedude esikhathini esidlule?
Amabhizinisi amaningi angathembekile azovezwa minyaka yonke ukuze ahlele uhlu oluvinjelwe lwabathengi. Lezi zinhlu ezivinjelwe zihlobene eduze nempilo yethu. Namuhla, sizokuyisa emhlabeni wengilazi yezimoto futhi sivule imodi yeso legolide:
1. Ukungaqondi kahle ingilazi yemoto mbumbulu nentula
Abanikazi bezimoto bathenga ingilazi yemoto eshibhile: uyajabula kuphela ngenkathi uyithenga! Asikho isikhathi esijabulisayo noma esibulalayo.
Isithombe esingenhla yisithombe esihlanyayo sengozi yemoto ku-inthanethi. Eqinisweni, ukuthenga ingilazi yemoto engelona iqiniso nengenasici kusindisa imali encane futhi kwanelisa injabulo yesikhashana, kodwa kuyosabeka esikhathini esizayo! Uyazi, uma unenhlanhla, ungase ungadingi ukufaka ingilazi yemoto impilo yakho yonke. Kungani kufanele uzikhathaze ngale nzuzo? Ukuphepha kuyigugu!
Ukuthengisa izimpahla zomgunyathi ukuze wenze inzuzo enkulu: abanye abakhiqizi abancane benza futhi badayise ingilazi yezimoto ezingamanga nezingaqinile ukuze benze inzuzo enkulu ukuze bonge izindleko.
Uyazi, lolu hlobo lokuziphatha alukho emthethweni. Ukuze uthole le nzuzo, kufanele ubhekane nenhlekelele yokuboshwa kanye nomuzwa wecala lomqondo. Ngoba nje lolu cezu lwengilazi yemoto engelona iqiniso kanye ne-shoddy lungacekela phansi umndeni & hellip& hellip;
Okungelona iqiniso kugcwele emakethe yengilazi yezimoto. Ubani obanike ithuba? Zingaki izibuko zemoto zomgunyathi nezingenalutho ezikhona?
Bheka isaziso sakamuva esimelene nomgunyathi se-Fuyao Group, umnikezeli ochwepheshe wezingilazi zezimoto, kanye nemibiko yezindaba ezinkulu ngengilazi yezimoto mbumbulu nentula:
Ingilazi yemoto ewumgunyathi yokuqala nedukile isiseduze!
Izinkulungwane zezingilazi zezimoto eziwumgunyathi nezingenalutho zithutheleka emakethe njalo ngenyanga. Uma zifakwe ezimotweni, kuzobeka izinkulungwane zemindeni engcupheni. Lona nje ithiphu leqhwa. Izingilazi eziningi zomgunyathi nezingenalutho ezingakatholakali zisasebenza, okusongela ukuphepha kweningi labashayeli nabagibeli.
2. Ukulimala kwengilazi yemoto mbumbulu nentula
Ngokwezibalo zeminyango efanele, phakathi kwezingozi zomgwaqo eminyakeni yamuva, cishe amaphesenti angu-10 abashayeli nabagibeli balimala ngenxa yengilazi yemoto engafanelekile, futhi izinga lokufa lenyuke ngo-2%. Ngakho-ke, yiziphi izingozi zokuphepha ezingaba khona zengilazi yemoto engafanelekile emakethe?
Ukumelana nokungenwa kahle kokungena kanye nokumelana nomthelela wengilazi yemoto eyinkohliso nentula: ngemva kokuba ingilazi yangempela yezinga eliphezulu iphukile, izinhlayiya zengcezu zincane futhi azinayo imiphetho namakhona, okungelula ukulimaza abantu; Ngemva kokuphuka kwengilazi yemoto mbumbulu nentula, izingcezu zinkulu kanti ezinye zinemiphetho namakhona, okulula kakhulu ukulimaza abashayeli nabagibeli.
Ingilazi ephansi izokwenza umshayeli azizwe enesiyezi: iwindshield ephansi ifana nesibuko esiyiconvex. Indawo ebonwe umshayeli ngefasitela ikhubazekile, ebizwa ngokuthi i-light distortion. Nakuba kungabonakali, kulula ukwenza amehlo omshayeli akhathele futhi akhiqize inkohliso. Ukushayela isikhathi eside kulula ukudala izingozi zomgwaqo.
3. Ukucwasa kweqiniso namanga
Bheka uphawu lokuhweba lwengilazi: uphawu lokuhweba luhlukaniswe ngophawu lwezinga lokushisa eliphezulu kanye nophawu lwezinga lokushisa eliphansi. Uphawu lokuthengisa lwengilazi yemoto yangempela ngokuvamile uphawu lwezinga lokushisa eliphezulu. Ifonti yophawu lokuhweba icacile futhi iyafana, okungelula ukususwa izinto ezicijile njengezinzipho, kuyilapho uphawu lokuhweba lwengilazi eliphansi lufuthwa kamuva, okuvamise ukuba uphawu lwezinga lokushisa eliphansi. Uyinki awucacile, kulula ukunamathela futhi awulingani. Ngakho-ke, ifonti nephethini kubukeka kulukhuni, kunemiphetho emangelengele, okulula ukuyisusa.
Bheka i-glass edging: abakhiqizi bengilazi bangempela banomsebenzi omuhle kakhulu. Ukuhlela kuzokwenziwa nxazonke ucezu ngalunye lwengilazi, olubushelelezi kakhulu futhi oluthambile ngesandla. Imiphetho yengilazi yomgunyathi ilukhuni futhi ayijwayelekile, okulula ukunwaya izandla zakho.
Bheka umbambi wengilazi: ingilazi yangempela eminingi ifakiwe ngesikhathi sokukhiqiza. Ingilazi yemoto engelona iqiniso futhi engenalutho ngokuvamile iwucezu nje lwengilazi yepuleti elibushelelezi. Uma ushintsha, udinga ukususa umbambi wesibuko wengilazi embi futhi unamathele engilazini entsha nge-glue ekhethekile. Kufanele uqaphele lapho ubona lesi sigcawu. Ingilazi engenasibuko isibambi ingase ibe umkhiqizo mbumbulu noma oshibhile.
Umbuzo welebula le-anti-feiting: isibonelo, insiza ngayinye ye-Fuyao enengilazi elayiniwe izoba nelebula elimelene nomgunyathi. Ungashayela ku-40098868 ukuze ubuze ngobuqiniso.
Umehluko olula phakathi kwengilazi ye-auto eyiqiniso nengamanga kanye ne-shoddy uvela kakhulu ekwenziweni nasekubukekeni, kodwa ukulingisa okuphezulu emakethe cishe kungamanga. Abanikazi bezimoto ezijwayelekile kumele kube nzima ukuhlukanisa ingilazi yemoto eyiqiniso neyamanga. Kungakhathaliseki ukuthi unekhono kangakanani ekuhlukaniseni iqiniso kwamanga, nakanjani ayoba namaphutha. Ngakho-ke, lapho uthenga, sicela ukhombe iziteshi zokuthenga eziqokwe ngokusemthethweni futhi ususe izingozi ezifihliwe emthonjeni, ukuze ugweme ngempumelelo ukulimala kwengilazi yemoto mbumbulu nentula.
Isikhathi sokuthumela: 21-10-21